Ungakulapha kanjani ukwesaba udokotela wezilwane | Izinja Umhlaba
URachel Sanchez | | Ukuziqeqesha
El ukwesaba udokotela wezilwane Kujwayelekile kakhulu ezinjeni, ngisho nokusabela ngolaka lapho ufika emtholampilo. Kulezi zimo, ngisho nokuhlolwa okujwayelekile kungaphenduka isihogo. Ukuqeda le nkinga akulula, kepha singayenza ngokubekezela nangamaqhinga ambalwa.
Okokuqala, kubalulekile ukuthi inja ayigcwele amandla ngesikhathi sokuvakasha kwezilwane. Kunconywa kakhulu ukuthi ukwenze ube nesikhathi esimnandi kusengaphambili ukuze wehlise umoya futhi ngaleyo ndlela unciphise ukukhathazeka kwakho. Uhambo nalo lubalulekile. Uma isilwane sesaba kakhulu emotweni, kungcono uma sihamba.
Njengakuningi lwezinkinga zokuziphatha ezingathwala uboya bethu, ukuqinisa okuhle uzoba umlingani wethu omkhulu. Ngemiklomelo nokucindezelwa sizomenza ahlanganise nomtholampilo wezilwane nokuthile okuhle. Isibonelo, singamnikeza ukwelashwa ngokushesha nje lapho engena esikhungweni, lapho ehleli egumbini lokulinda, futhi-ke, ngokushesha nje lapho eqala ukuxhumana nochwepheshe. Kuyinto elula ukuthi kube nguye onikeza inja imiklomelo.
Nathi kufanele qhubeka uzolile, engakaze amemeze noma aphakamise izwi lakhe. Futhi ukuthi izinja zitheleleka kalula ngamandla ethu, ngakho-ke inhloso ukuthi siqine futhi sizole. Ngakolunye uhlangothi, i- udokotela wezilwane Kufanele futhi udlulise ukuzethemba esilwaneni, usebenzisa ithoni ethambile yezwi namagama anomusa.
Okuthile okuzoba usizo olukhulu kuyenziwa ukuvakashelwa njalo emtholampilo ukuze nje uthi sawubona, ngaphandle kwesidingo sokuba uchwepheshe ahlole isilwane. Ngale ndlela uzobona ukuthi ukuya kudokotela wezilwane akusho ngaso sonke isikhathi ukungahambi kahle noma ubuhlungu, kepha futhi kungaba yindawo enobungani lapho uthola khona uthando nobumnandi.
Ekugcineni, kwesinye isikhathi ukungenelela kwe- umqeqeshi wezinja. Sikhuluma ngamacala adlulele lapho ukukhathazeka kwesilwane kuphakeme kakhulu futhi kungalimaza impilo yesilwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayelapha kanjani ukwesaba udokotela wezilwane
Ungenza kanjani uma inja yami ihlushwa ukushisa
Ungenza kanjani inja yami inuke kangcono